February 19, 2021 - Xisbiga Qaransoor
Innaalillaah waa innaa illaahay raajucuun ? illaahay ha u naxariisto dhammaan ehelada iyo qaraabada ay ka geeriyoodeen wiilashii Soomaaliyeed ee ku geeriyooaday iska hor imaadka xalay iyo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Dadka ku dhaawacmay sidoo kale illaahay caafimaad degdeg ha siiyo. Waa nasiib xumo in dhiig Soomaaliyeed la daadiyo. Haddii dastuurka dhigaayo in shacabka …
WAR SAXAAFADEED “Waa nasiib xumo in dhiig la daadiyo.” Read More »